Facts About Pets – Page2– Petunity
သင့်ခွေးလေးကို "ငြိမ်ငြိမ်နေ" ဆိုတဲ့စကားကိုမှတ်မိအောင် လေ့ကျင့်ပေးနိုင်ခြင်း။
သင့်ခွေးလေးသာ "ငြိမ်ငြိမ်နေ" ဆိုတဲ့စကားကို မှတ်မိပြီး လိုက်နာနိုင်ပြီဆိုရင် သင်သူ့ကို ထိန်းချုပ်ရာမှာလွယ်ကူသွားမှာပါ။ဒီလိုလေ့ကျင့်ပေးခြင်းဟာ သင့်ခွေးလေးအတွက် အခြားအခြားသော အန္တရာယ်တွေနဲ့မတွေ့ကြုံအောင် ကူညီပေးမှာပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်PetunityHealthy Pets & Happy You!
ကြောင်လေးတွေကို အလွန်အကျွံကျွေးမွေးခြင်း။ 🐈
အဝလွန်ခြင်းက ကြောင်လေးတွေအတွက် ပြဿနာကြီးတစ်ခု ဖြစ်လာနေပါပြီ။အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့ ရောဂါတော်တော်များများက အဝလွန်ခြင်းနဲ့ ပတ်သက်နေပါတယ်။ကြောင်လေးတွေရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနဲ့ သက်တမ်းအပေါ်မှာလည်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိနိုင်ပါတယ်။ဝဝကစ်ကစ်ကြောင်လေးတွေက အလွန်ချစ်စရာကောင်းပါတယ် ဒါပေမယ့် ကြောင်လေးကျန်းမာရေးအတွက် ဝိုင်းပြီးစဉ်းစားကြရအောင်နော်။အသေးစိတ်ကို နောက်နေ့မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်နော်။ကိုယ့်ဆီမှာ ဝဝကစ်ကစ် ကြောင်ဖတ်တီးလေးတွေ ရှိလား? 😁😍
ကြောင်လေးတွေကို အစာကျွေးရာတွင် ပိုင်ရှင်များ မှားတတ်သည့်အရာများ
သင့်ကြောင်လေးက သင့်ပန်းကန်ထဲမှ အစားအသောက်ကို ယူစားတာမျိုး မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင် သူ့ကို နည်းနည်းလေးမှ အကျင့်လုပ်ပြီး မကျွေးမိပါစေနဲ့။ 🐈🐱အဲလိုလုပ်တာမျိုးက ချစ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း နောက်နောင် တောင်းစားတဲ့ အကျင့်မျိုးကို ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ 🐱နောက်ပြီး ခုံတွေ ထမင်းစားပွဲတွေပေါ် ခုန်တက်တာမျိုးကို ခွင့်ပြုမိသလို ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ 🐈အဲဒါက ကြောင်လေးရဲ့ တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးအတွက် အလေ့အကျင့်ဆိုးဖြစ်ယုံတင်မကဘဲ အန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြေလည်း ရှိပါတယ်။ 🐈ခုန်တက်ပြီး အစားအသောက်တက်စားတာမျိုးကို...
ခွေးလေးတွေကို တံခါးခေါင်းလောင်းသံနဲ့ အကျွမ်းတဝင်ရှိအောင်လေ့ကျင့်ပေးခြင်း။ 🔔🧡🐾
ခွေလေးရှိတဲ့ အိမ်တော်တော်များများမှာ ကြုံတွေ့ရတာကတော့ အိမ်ကိုဧည့်သည်လာတဲ့အခါ သူတို့ဟာ ဟောင်လေ့ရှိတတ်ကြပါတယ်။ဝုတ်ဝုတ် ^^ 🐶သင့်ရဲ့ခွေးလေးကို ခေါင်းလောင်းသံကြားတဲ့အခါ သင်သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နေရာမှာ ထိုင်တတ်အောင်လေ့ကျင့်ပေးပါ။ 🐕ပထမဆုံးခေါင်းလောင်းသံမပါဘဲ လေ့ကျင့်ပါ။သင်ကအိမ်ရှေ့တံခါးကိုသွားတဲ့အခါ သင့်ခွေးလေးကို သူ့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာကိုပို့ပေးပါ။သူကဒီအလေ့အကျင့်ကိုမှတ်မိသွားပြီဆိုရင် တံခါးခေါင်းလောင်းသံနဲ့လေ့ကျင့်ပါ။ တံခါးခေါင်းလောင်းသံကြားတဲ့အခါ သင်ကခွေးလေးကို သူ့အတွက်နေရာထံပို့ပေးပါ။သူဟာဒီအလေ့အကျင့်ကို ကောင်းကောင်းမှတ်မိသွားပြီဆိုရင်တော့ တံခါးခေါင်းလောင်းသံကြားလို့ သင်အိမ်ရှေ့တံခါးသွားဖွင့်တဲ့အချိန်မှာ သူဟာသူ့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ထိုင်နေပါလိမ့်မယ်။ 😍😘ကျေးဇူးတင်ပါတယ်PetunityHealthy Pets & Happy You!
သင့်ခွေးလေးကို ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိအောင် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း။ 😁
သင့်ခွေးလေးနဲ့ အပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အစီအစဉ်ရှိပေမယ့် အပြင်မှာ ရာသီဥတုမကောင်းဘူးဆိုရင် စိတ်မညစ်ပါနဲ့။ အိမ်တွင်းမှာပဲသူ့ကို လေ့ကျင့်ပေးလို့ရတယ့် နည်းလမ်းတွေ ရှိပါတယ်။ 😚 🐶သင့်ခွေးလေးကို ကိုယ်ပိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိအောင် လေ့ကျင့်ပေးခြင်း။တကယ်လို့ သင့်ခွေးလေးဟာ သူ့ကိုယ်သူ ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း နည်းနေသေးရင်တော့ ဒီအချိန်ဟာ သူ့ကိုသင်ပေးဖို့ အတွက် အချိန်ကောင်းပါပဲ။ခွေးလေးကြိုက်တဲ့ အစားအစာ (သို့) အရုပ်ကို အခန်းရဲ့ တစ်ဖက်မှာထားပြီး...
ယုန်လေးတွေကို အသက်အရွယ်အလိုက် အစာကျွေးခြင်း။
ယုန်လေးတွေချစ်လို့ မွေးထားပြီဆိုရင် သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီး နဲနဲပါးပါးသိထားတာထက် အများကြီးပိုသိတာက ကလေးတွေကို ပိုမိုဂရုစိုက်နိုင်မှာပါ။Petunity မှာ တိရိစ္ဆာန်လေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တူတူဂရုစိုက်ကြပြီး တူတူချစ်ကြမယ့် အကြောင်းလေးတွေ တင်ပေးနေမှာမို့ အားပေးကြဖို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ 🐰😊ကဲ ခုတော့ ယုန်လေးတွေအကြောင်း ဖတ်လိုက်ရအောင်။ 😘 ယုန်လေးတွေကို အစာကျွေးရာမှာ အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ pelletများ၊ လတ်ဆတ်တဲ့ကောက်ရိုး၊မြက်ခြောက်များ၊ ရေနဲ့ အသီးအရွက်များကို...
ခွေးလေးတွေ မွေးမြူထားသူတိုင်း သိသင့်သည့် အကြောင်းအရာများ
၁။ ခွေးလေးတွေလည်း သွားကျိုးလေ့ရှိပါတယ်။ 🐶🤭ခွေးပိုင်ရှင်တွေက ခွေးလေးတွေရဲ့ ချွန်ထက်တဲ့ သွားသေးသေးလေးတွေနဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပြီးသားပါ။ ဒါပေမယ့် ခွေးလေးတွေရဲ့သွားကို ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတွေ့ရပြီဆိုရင်တော့ အနည်းနဲ့ အများတော့ ထိတ်လန့်ကြမှာပါပဲ။တကယ်တော့ ခွေးလေးတွေဟာလည်း အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ သွားကျိုးလေ့ရှိပါတယ်။ ခွေးလေးတွေဟာ အသက် ၃ ပတ်အရွယ်ဆိုရင် ငယ်သွားလေးတွေစပေါက်ပါပြီ။ အသက် ၄ လသားဆိုရင်တော့ ငယ်သွားလဲပါပြီ။ဒါ့ကြောင့် သူတို့ရဲ့ ငယ်သွားလေးတွေကျိုးနေတာတွေ့ရင် အထိတ်တလန့် မဖြစ်ပါနဲ့။...
ကြောင်လေးတွေအတွက် သန်ချခြင်း နှင့် သန်းတွယ်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်ခြင်း
ကြောင်လေးတွေ အသက် ၁၂ ပတ် မတိုင်ခင်မှာ သန်ချခြင်းကို ၂ ပတ် တစ်ခါ လုပ်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ၁၂ ပတ်ထက်ကြီးသွားရင်တော့ ၃ လတစ်ခါ သန်ချပေးရပါမယ်။ 🐈သင့်ရဲ့ကြောင်လေး သန်းကင်းစင်စေရန် အတွက် လစဉ် သန်းပျောက်ဆေး သုံးပေးရပါမယ်။ ပြီးတော့ သင့်ရဲ့အိမ်ကိုလည်း ကြောင်သန်းမရှိအောင် သန့်ရှင်းပေးရပါမယ်။ 🐱တုတ်ကောင်တွေနဲ့ သန်လုံးကောင်တွေဟာ လူတွေ အထူးသဖြင့်...